'हैट, यसरी पनि सामाजिक कार्य गर्न सकिन्छ?'
सुनिलमणि दाहाल वाशिङ्टन डिसी
गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको आगामी कार्यकालका लागी हुने निर्बाचन ११ र १२ अगस्टमा हुँदैछ। निर्वाचनमा गुट उपगुट सहितको चरम बिवादले यस सस्थाको साख झनै गिरेको छ। एउटा सामाजिक कार्यका लागी स्थापित सस्थालाई आफ्नो पारिवारिक सम्पती सरह हैकम जमाउने एक थरी कम्मर कसेर लागेका छन भने अर्का थरी त्यस हैकमलाई तोडन लागी परेका छन।
अमेरिकाका नेपाली भाषीहरु माझ सामाजिक कार्य भनेको के हो, कसरी र कस्का लागी भन्ने जानकारहरुको खडेरी लागेको भन्न पनि सकिदैन। तर, सस्था बाहिर धेरै अनुभवी, बिज्ञ तथा बुद्दिजिवीहरु छन, तिनीहरु यस्तो विवाद र किचलो तथा मुद्दा मामिलामा रहेर समाज सेवा गर्न नसकिने तर्क राख्दै बाहिर बस्न रुचाउदछन। तर, प्रश्न सिधा तेर्साउन सकिन्छ आखिर किन यसरि सस्थालाई नै बदनाम गरेर अध्यक्ष पदका लागी मरिहत्ते गर्दैछन प्रत्यासी महोदयहरुरु
सदस्यता नामावली हेर्ने हो भने यस सस्थामा बिज्ञ तथा बुद्दिजिवीहरुले अलिकती पनि रुची नदेखाएएको भन्न सकिन्छ यूवाहरु सस्थाबाट धेरै टाढा नै छन। उनीहरुलाई यो सस्थाबाट वितृस्णा छ किनकी यो सस्थाबाट हामी लाई के फायदा भन्ने तर्क गर्दछन यूवाहरु। आफ्नो तर्फ सदस्य सख्या बढाउन ठाउ ठाउमा बुथ खडा गरी आफ्नो खर्चले सिङै परिवारलाई नै सदस्य बनाईएको छ। त्यसैले यस्तो किचलो र बेतिथीका कारण आज एनआरएन अमेरिका केहि सिमित, स्वार्थी, अवसरवादी तथा झोलेहरुको समूह हुन पुगेको छ।
निक्कै लामो बिवाद र कसरत पस्चात सदस्यता बितरणमा भएको अनियमितताको छिनोफानो पनि भयो। बैधानिक सदस्यहरुको नामावली पनि प्रकाशित भयो। आगामी अगस्ट ११ र १२ का लागी निर्वाचनको मिती पनि तोकिएको छ। निर्वाचन कमिटिले उम्मेदवारहरुको पारम्भिक नामावोली सूची पनि प्रकाशन गर्यो। प्रारम्भिक नामावली सूचीमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका गौरीराज जोशीको नाम प्रकाशित नभए पछी फेरी हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने काम शुरु भएको छ।
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका गौरीराज जोशीको नाम उम्मेदवारको नामावली सूचीमा प्रकाशित नभए पछी धेरै मिडियाहरुले बिरोध गरे। सामाजिक सन्जालमा निर्वाचन कमिटीले एनआरएन आइसिसिको निर्णय अनुसार जोशीको नाम हटायो भन्ने आरोप समेत लगाए।
यसै प्रकरणका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीमा निर्वाचन कमिटी प्रमुख बन्दिता शर्मा भन्छिन 'सस्थाले निर्वाचन कमिटी बनाएको छ। निर्वाचन कमिटीले बिधी बिधान अनुरुप उम्मेदवारहरुको लागी आबेदन माग गरेपछी रित पूर्वक मागीएको कागजातहरु पेश गर्नु पर्ने कर्तब्य प्रत्यासी उम्मेदवार को हो। जोशीजीले आफ्नो निवेदनमा आवस्यक प्रमाणको कागजात पेश गर्नु नभएको कारणले कागजात माग गरीएको हो।'
बिधी र बिधानका बारेमा राम्ररी नबुझी मिडियाहरुले निर्वाचन कमिटीलाई मुछेकोमा दुखेसो पोख्दै प्रमुख शर्मा भन्छिन – ‘सामाजिक कार्यका लागी म जस्ता धेरैले बिभिन्न सस्थाहरुमा निशुल्क भोलियन्टियर काम गर्दै आएका छन। एनआरएनको जस्तो जटिल कार्य लाई बिवादित हैन की मर्यादित बनाउने कर्तब्य सबै शुभचिन्तक को हो। निस्वार्थ भावनाले गरिएको कार्यलाई अनावस्यक उचाली बिवादित बनाईन्छ। हैट यसरी पनि सामाजिक कार्य गर्न सकिन्छ?'
सस्थाको बिधान छ, तर दुख लाग्दो कुरा के छ भने आफु अनुकुल हुने गरी संसोधन गर्ने काईते परिपाटीले यस सस्थालाई सधै बिवादित बनाउदै आएको छ। कुनै बिवाद भएमा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति एनआरएन आइसिसीु को निर्देशन लिने भन्ने छ। अमेरिकामा दर्ता भएको सस्थाले आफ्नो विधानको भावना बिपरित हुने गरी अर्कै मुलूकमा दर्ता भएको सस्थाको निर्देशन कसरी मान्न सक्छरु
एनआरएन अमेरिकाको बैधानिक सदस्यता संख्या लाई हेर्ने हो भने अमेरिकामा बसोबास गर्ने कूल नेपालीहरुको पाँच प्रतिशत मात्र हुन आउछ। यो अत्यन्त न्युन संख्या हो जसले एनआरएन अमेरिकाको अस्तित्व माथी प्रस्न खडा गरेको छ।
अत्यन्त बिबाद र किचलोका बिच एनआरएन अमेरिकाको आगामी कार्यकालका लागी हुने निर्बाचन समेत प्रभावित भएको बर्तमान अवस्थामा जम्मा ५ प्रतिशत नेपालीहरुलाई समेटी कसरी नेपालीहरुको छाता सँगठन हुन सक्छ , यस तर्फ ध्यान केन्द्रीत हुनु आवस्यक छ। अर्का तर्फ, आपसी स्वार्थ र मनमुटाबले एनआरएन अमेरिकाको सेवा भावमा ह्रास आएको छ, सस्था बदनाम हुन गै नेपाली भाषी बिच यसको महत्व र आस्था माथी अविस्वास सृजना हुन गएको छ।
अमेरिका भित्रका नेपालीहरुको हितका लागी खास गरी उच्च शिक्षाका लागी अमेरिका आएका नेपाली बिध्यार्थीहरु र, अवसरका लागी भौतारिएका यूवाहरुको क्षमता अभिबृद्दी गर्ने तर्फ बिशेष अभियान थाली एनआरएन अमेरिकाले ठोस भूमिका निर्बाह गर्दै नेपालीहरुको मन भित्र पस्न सक्नु पर्दछ। प्रतेक नेपालीहरु लाई प्रवासमा अविभावित्व प्रदान गर्न सक्नु नै एनआरएनको ठुलो उपलब्धी हुनेछ।
अमेरिकामा देखिएको बढदो नेपालीहरुको उपस्थिती र नगन्य सरहका सदस्य रहेको अमेरिकाका नेपालीहरुको छाता सँगठन गैरआवासीय नेपाली संघलाई नेपालीहरु प्रती समर्पित हुन र उत्तरदायी हुन अझै मौका छ। अबको दिनमा चुनावी रणनिती तर्फ अश्वस्थकर रुपमा प्रतिस्पर्धाका लागी खटनु भन्दा प्रबासी नेपालीहरुको लागी बास्तबिक सेवा र सहयोगमा ध्यान दिनु एनआरएन अमेरिकाको गिरदो साख बचाउने एक अवसर हुन सक्छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन ८, २०७४, ०४:०१:२४